L3 Tshintsha abavelisi kunye nababoneleli - China L3 Shintsha ifektri
S5750E-26X-SI L2 Dual Stack 40G Okrelekrele Fibre Tshintsha
Iswitshi ye-S5750E-26X-SI sisizukulwane esitsha sobukrelekrele obukrelekrele kunye notshintsho lokufikelela olwenziwe yiDCN yenethiwekhi kunye nenethiwekhi ye-MAN. I-S5750E-26X-SI ibonelela nge-24 10GbE (SFP +) kunye ne-2 40GbE (QSFP) amazibuko omzimba kunye nokuhanjiswa kwamandla, eyilelwe imeko yokufikelela ye-10G kunye nenethiwekhi ngokubanzi ye-10G imeko yokuhlangana kunye neempawu zoyilo zebakala lokunxibelelana ngokuthembekileyo okuphezulu, kunye nokudinwa. Iimpawu eziphambili kunye nokuqaqamba kokuSebenza kunye nokuHamba ngokuNxibelelana kweGigabit Ethernet ye-S5750E-26X-SI ...
S5750E (R2) Dual Stack 10G Ethernet Routing Fibre Tshintsha
I-DCN S5750E yotshintsho lochungechunge luzele kukutshintsha kwemigca yokuhambisa umkhondo ngokuzinzileyo, okwakhelwe ngaphakathi kumazibuko e-10GbE e-uplink. Olu tshintsho lilawulwa ngokupheleleyo lubonelela ngokufumaneka okuphezulu, ukusasazeka, ukhuseleko, ukusebenza kwamandla, kunye nokusebenza ngokulula okunempawu zeL3. Kukulungele ukuhlanganiswa okanye ukufikelela kumgangatho wekhampasi, ishishini, urhulumente kunye nenethiwekhi yomboneleli ngenkonzo. Iimpawu eziphambili kunye nokuqaqamba kokuSebenza kunye nokuSebenza ngokuSebenza okuphezulu, S5750E (R2) uthotho lwenkxaso yesantya-santya seL2 / L3 phambili ...
I-DCN S5750E yotshintsho kuthotho lweshishini kukutshintsha kwemitshini yokuhambisa enamazibuko angama-10GbE e-uplink. Olu tshintsho lilawulwa ngokupheleleyo lubonelela ngokufumaneka okuphezulu, ukusasazeka, ukhuseleko, ukusebenza kwamandla, kunye nokusebenza ngokulula okunempawu zeL3. Kukulungele ukuhlanganiswa okanye ukufikelela kumgangatho wekhampasi, ishishini, urhulumente kunye nenethiwekhi yomboneleli ngenkonzo. Iimpawu eziphambili kunye nokuqaqamba kokuSebenza kunye nokuSebenza ngokuSebenza okuphezulu, S5750E (R2) uthotho lwenkxaso yesantya-santya seL2 / L3 ...